Njirisi nyocha Marketplace - Mozilla | MDN
Njirisi nyocha Marketplace
Edemede a na akọwa ihe ndị achọrọ ngwa ga enwerịrị iji kesaa ya n’ime Firefox Marketplace. Ezubere ihe ndị a achọrọ iji hakọọ ihe ndị nrụpụta na ndị ọrụ chọrọ site na Firefox Marketplace. Ndị nrụpụta chọrọ njirisi ndị dị mma, na adịgide, na enweghị nhịahụ, ndị ha nwere ike ịtụkwasị obi maka iyiwe azụmahịa n’elu ya. N’otu aka nke ọzọ, ndị ọrụ chọrọ nkwa na ngwa agaghị ebute mmekpa ahụ, ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ ha, yana ngwa ahụ ga-eme ihe o kwuru na ọ ga-eme. Ihe ndị achọrọ na ngwa dị n’okpuru na agbado anya na nhakọ n’etiti mkpa ndị a.
Ndị a bụ ihe ndị Mozilla tụpụ anya na ihe nyocha ngwa bụ yana ihe ọbụghị:
A ga-etinye njirisi n’ụzọ dị mma, eji obi ebere, bụrụ nke na anaghị agbanwe agbanwe. Ezubeghị ụkpụrụ nyocha ngwa ka ọ bụrụ ihe nche, mana ka ọ bụrụ akara mmetụta na enye nzaghachi iji nyere ndị nrụpụta aka imezu ihe ha.
Ndị nyocha abụghị otu QA! N’oge ụkpụrụ nyocha, mmadụ ga-elenye anya na ndepụta ngwa ahụ ma gbuo obere oge na iji ngwa ahụ dị ka onye nkiti ga-eme.
Ọ bụrụ na ngwa daa nyocha, a ga-enye onye nrụpụta ahụ nkọwapụta doro anya maka nsogbu ndị ahụrụ, usoro iji mepụtagharịa, yana ebe enwere ike, onye nyocha ahụ ga-atụrụ onye nrụpụta ahụ aka n’ụzọ ziri ezi site na ịnye njikọ ndị gara na ndekọ nkwado ndị dị mkpa ma ọ bụ nye nkwado maka mgbanwe ndị a ga-eme.
Ndị nyocha anaghị eme mkpebi ọ bụla maka otu ngwa ga-adị n‘anya, naanị na otu ngwa ahụ si arụ ọrụ. Dịka omụmaatụ, agaghị ajụ ngwa nwere nkeji isiokwu ederede ya na acha uhie dị n’okirikiri orenji n’ihi ọ jọrọ njọ, mana enwere ike ịjụ ya ma ọ bụrụ na enweghị ike ịgụ ihe dị na ya.
Anyị na-enye ndị nrụpụta elele nke ịnwe obi abụọ oge niile. Ọ bụrụ na o doghi anya na ekwesịrị ịjụ ngwa, ndị nyocha ga-ajụ ajụjụ tupu enye njụ. Agaghị (akpachara anya) jụ ngwa n’ihi nsogbu nyiwe na adịghị n’ike aka nke onye nrụpụta ahụ; agbanyeghị anyị nwere ike ijidetu nkwenye ma ọ bụrụ na anyị enwenwughi ike iji ngwa ahụ wee rụọ ọrụ.
Nkọwapụta n’uju nke nka nche ngwa ahụ dị ebe a: https://wiki.mozilla.org/Apps/Security
A ga-enyerịrị ndepụta ngwa ahụ site na otu isi mmalite ka ngwa ahụ.
A ga-enyerịrị ndepụta ngwa ahụ isi Ọdịnaya-Ụdị nke ngwa/x-web-app-manifest+json.
Ngwa ekwesịghị iji mbugharị ma ọ bụ iframes iji dọnye ọdịnaya nke onye nrụpụta ahụ enweghị ikike iji.
A ga-akọwapụtarịrị ikikere ndị arịọrọ na ndepụta ngwa ahụ yana nkọwapụta ihe kpatara eji chọọ ikikere ahụ.
Ngwa ndị type nwere elele ga-agafekwu nyocha ndị ọzọ, gụnyere nyocha koodu, n’ihi mmemme adịgboroja nwere ike ịdị yana ntufu data dị na API ndị nwere elele.
Agaghị anabata ngwa ọ bụla gabigara Ntuziaka Ọdịnaya anyị dị n’okpuru. Ọ bụrụ na ị chere na ịnwere okwu siri ike, biko rịọ otu nyocha maka nsacha anya, ọbụlagodi na ngwa ahụ adịbeghị nkwadobe maka nnyefe. Anyị chọrọ ịnyere gị aka ịnọrọ n’ụzọ ziri ezi, kama itinye oge nrụpụta n’ọdịnaya a ga-ajụ.
Bido na Jenụwarị 2014, ngwa niile ga-enweta ogo site na International Age Rating Coalition (IARC). Iji nweta ogo a, anyị ga-eduje gị na njụajụjụ ndị nkenke n’oge ụkpụrụ nnyefe, ị ga-enweta ogo ahụ ozugbo. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ụkpụrụ ịnye ogo ahụ dị here.
Nseta ihuenyo na nkọwapụta enyefere na Firefox Marketplace ga-egosipụtarịrị ngwa ahụ kpọmkwem. Ị nwere ike ịgụnye onyonyo 1-2 “ịre ahịa” na egosi ndakọta, tụlee atụmatụ, ma ọ bụ otu aka ọzọ kpalite mmụọ, mana a ga-enwerịrị opekata mpe otu nseta ihuenyo nke ngwa ahụ n’ọrụ, ka ndị ọrụ nwee ike ịhụchalụ ihe ha na enweta. Ọ bụrụ na otu n’ime nseta ihuenyo gị bụ splash ma ọ bụ ihuenyo mbido, ị ga-agụnyerịrịkwa nseta ihuenyo nke akụkụ arụmọrụ nke ngwa gị.
Na ndepụta ngwa ahụ, locale keys kwesịrị ịmakọrịrị na asụsụ ndị ngwa gị na akwado. Site na ịnye igodo mpaghara na Polish, ndị ọrụ ga-atụ anya na ngwa gị ga-adị n’asụsụ ahụ.
Akara ngwa ga-esoro Firefox OS app icons style guide. Naanị akara 128 x 128 bụ iwu, mana anyị na akwadokwa akara 512 x 512 (maka nkọwapụta ndị ọzọ, hụ Icon implementation for apps.) Mara na akara nwere ike ịgba okirikiri, akụkụ anọ agbara okirikiri, ma ọ bụ nwee akụkụ anọ, dị ka ntuziaka nka.
Ndepụta a na akọwa ụdị nke ọdịnaya na adịghị mma maka Firefox Marketplace. Ndepụta a bụ ihe nkọwa, ọbụghị kpọmkwem, enwere ike imelite ya. Ọ bụrụ na achọpụtarana ngwa na agabiga ntuziaka ọdịnaya ndị a, Mozilla nwere ikike iwepu ngwa ahụ ozugbo n’ime Firefox Marketplace.
Achọghị ihe akwamiko rụrụ arụ n’anya, ma ọ bụ nseta na egosi akwamiko ma ọ bụ ọgbaghara.
Achọghị ọdịnaya na agabiga ikike mmadụ ọ bụla, gụnyere akụ ọgụgụ isi ma ọ bụ ikike ọnwịnwe ma ọ bụ ikike nke nzuzo ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ.
Achọghị ọdịnaya ezubere iji bute mmekpa ahụ na Mozilla ma ọ bụ ndị ọrụ ya (dịka koodu adịgboroja, nje, spyware ma ọ bụ malware).
Achọghị ọdịnaya megidere iwu ma ọ bụ na akwado mmemme megidere iwu.
Achọghị ọdịnaya na eme nghọgbụ, ndughe, eji eme mpụ ma ọ bụ ezubere ya iji dọrọ ma ọ bụ zuru njirimara mmadụ.
Achọghị ọdịnaya na akwado igbu chacha.
Achọghị ọdịnaya na akwado mgbasa ozi nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị megidere iwu ma ọ bụ ndị a na ejikwa.
Achọghị ọdịnaya na emegbu ụmụaka.
Achọghị ọdịnaya na emetọ, amaja, ebute ọgbaghara, ma ọ bụ kwado mmemme ịkpa oke n’ebe mmadụ ma ọ bụ otu nọ dabere na afọ, okike, agbụrụ, obodo, okpukperechi, ọnọdụ mmekọrịta n’etiti nwoke na nwanyị, nkwarụ, okpukperechi, ọnọdụ ala ma ọ bụ otu ndị ọzọ ekpuchidoro ma ọ bụ nwee okwu asị.
Achọghị ọdịnaya na edughe onye ọrụ ịme mkpebi ịzụta ihe.
Onye ọrụ ga-enwerịrị ike ịme atụmatụ mbụ nke ngwa ahụ egosiri. A ga-ekpesa mperi na obere mmekpa ahụ n’aka onye nrụpụta ahụ, mana ọgaghị egbochi ngwa na ịnweta nkwenye.
Ngwa ahụ agaghị emebi arụmọrụ ma ọ bụ ndaba sistemụ.
Onye nrụpụta ga-agbarịrị mbọ ahụrụ anya iji hazie nyiwe ngwa otu kachasị mma maka nyiwe ebu n’uche. Ebumnuche nke ihe a achọrọ bụ ijide mbibi ndị doro anya, dịka:
Ngwa enyefere maka mkpanaka bụ maka saịtị desktọpụ doro anya.
Ngwa na adọtịghị nke oma ikpoju oghere ihuenyo dị adị (chee ebe ngwa 320x480 were naanị akụkụ elu na tabletị, ihe fọdụrụ na ihuenyo ahụ eghere oghe. Nke a abụghị ihe ebu n’uche!)
Ngwa ahụ ga-etinyeriri usoro nke ngagharị nke ya, ọ kwesịghị ịdabere na ihe nchọgharị chrome ma ọ bụ bọtịnụ azụ ngwaike, nke na agaghị adị na ngwaọrụ niile.
Dịka ọmụmaatụ, a ga-ajụ ngwa ma ọ bụrụ na onye nyocha gaa n’otu ebe n’ime ngwa ahụ, ma na ọ nwenwughi ike ịlaghachi azụ. ACHỌGHỊ na ngwa ga-etinye ogwe bọtịnụ ama ama na ngwa ndị ntọala.
Na Firefox OS ụ1.1 yana ndị karịrị ya, ị nwere ike itinye njirimara ndepụta chrome iji tinye obere njikwa ngagharị pekarịsịrị.
Ihe ngagharị, dịka bọtịnụ na njikọ, ga-adịrịrị mfe ịpị ma ọ bụ metụ.
Anyị tụrụ anya na anyị agaghị eji ya ma ncha, mana anyị nwere ikike iji wepu (“gbochie”) ngwa ọ bụla ebiputere nke emechara chọpụta na ọ gabigara nche, nzuzo, ma ọ bụ ihe ọdịnaya ọ bụla achọrọ, ma ọ bụ ngwa ndị na adọkpụ sistemụ ma ọ bụ arụmọrụ netwọk anyị nke ukwuu. A ga-agwa ndị nrụpụta maka ọnọdụ ahụ tupu egbochie ngwa ahụ, a ga-ewere ya dị ka ezigbo onye amaala belụsọ na anyị enwere ihe akaebe na ekwu otu ọzọ, a ga-enweta enyemaka n’uju site n’aka otu nyocha ngwa ahụ iji kwukọrịta ihe na eme yana mezie nsogbu ahụ. Ihe ịmaatụ nke ọnọdụ ebe a ga-eme mgbochi gụnyere:
Izi ozi adịgboroja
Ịgbanwe ọdịnaya site na Puppy Pictures ụ1.0 banye na Brutal Violence ụ1.0 (na emeliteghi ogo ọdịnaya ahụ)
Omume nke ngwa jọrọ oke njọ maka ọnụọgụ ndị ọrụ buru ibu — na adọkpụ arụmọrụ ekwentị, na ebute mbidogharị, na ebute ntufu data nke onye ọrụ, wdg. ebe ndị ọrụ enweghị ike ikwu na ọ bụ maka ngwa ahụ yana ebe enweghị ike imezi nke ahụ site na ibidogharị ngwaọrụ ahụ.
Ngwa ndị a na eji maka mbuso ọgụ na netwọk, dị ka ngọnarị nke ọrụ ekesara (DDOS).
Ngwa ndị a na enyekwu ozi ndị ọzọ gbasara ụkpụrụ nyocha na ndị nyocha ngwa:
Reviewers test criteria — ibe a na akọwa nnwale nke ndị nyocha ngwa ga-eme na ngwa gị
App reviewers — otu esi akpọtụrụ otu nyocha ngwa ma tinye aka iji nyochaa ngwa
Last updated by: mdnwebdocs-bot, 23 Maa 2019 6:57:26 P.M.
Other languages: Igbo (ig) English (US) (en-US) Afrikaans (af) عربي (ar) বাংলা (বাংলাদেশ) (bn-BD) বাংলা (ভারত) (bn-IN) Deutsch (de) Eʋe (ee) Ελληνικά (el) Español (es) Français (fr) Hausa (ha) हिन्दी (भारत) (hi-IN) Italiano (it) 한국어 (ko) Lingála (ln) Malagasy (mg) မြန်မာဘာသာ (my) Português (do Brasil) (pt-BR) Русский (ru) Kiswahili (sw) தமிழ் (ta) Wolof (wo) isiXhosa (xh) Yorùbá (yo) 正體中文 (繁體) (zh-TW) isiZulu (zu)